2010 – Year – Alpha Premium
Dante’s Inferno: An Animated Epic (2010) (App member only) ##unicode ဒနျတေးဆိုတဲ့စဈသညျတျောတဈယောကျ အနှဈနှဈအလလ တိုကျပှဲတှဝေငျပွီး အိမျပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ တဈအိမျလုံးက သတျဖွတျခံထားရတဲ့အပွငျ ဖခငျဖွဈသူနဲ့ အနာဂတျမှာလကျထပျဖို့စီစဉျထားတဲ့ ခဈြသူတို့ပါမခငျြးမလှအသတျခံထားရတာကို တှလေို့ကျရတဲ့အခါမှာ ဒနျတေးတဈယောကျ ဖွမေဆညျနိုငျဖွဈရပါတော့တယျ တဈပူပျေါနှဈပူဆငျ့ ရိုးသားဖွူစငျလှတဲ့ ရငျနှဈသညျးခြာခဈြရတဲ့သူရဲ့ ဝိဉာဉျလေးက ကောငျးကငျဘုံက အလငျးရောငျထဲကိုသှားရလုနီးနီး ငရဲဘုရငျ လူစီဖာက မကျြစိရှတေ့ငျ ဖမျးချေါသှားတဲ့အခါမှာတော့ စဈသညျတျော ဒနျတေးတဈယောကျငရဲထိလိုကျပွီး ကယျတငျပါတော့တယျ အငျဖာနိုငရဲရဲ့ စကျကှငျးကွီးကိုးခုကိုဖွတျပွီး ဘယျလိုတှရေငျဆိုငျမလဲ ဖခငျဖွဈသူနဲ့ ခဈြရသူတို့ကို ဘယျသူကသတျဖွတျခဲ့သလဲ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာတှကေို စိတျလှုပျရှားဖှယျ ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒန်တေးဆိုတဲ့စစ်သည်တော်တစ်ယောက် အနှစ်နှစ်အလလ တိုက်ပွဲတွေဝင်ပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ တစ်အိမ်လုံးက သတ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အပြင် ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ အနာဂတ်မှာလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ ချစ်သူတို့ပါမချင်းမလှအသတ်ခံထားရတာကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဒန်တေးတစ်ယောက် ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်ရပါတော့တယ် တစ်ပူပေါ်နှစ်ပူဆင့် ရိုးသားဖြူစင်လှတဲ့ ရင်နှစ်သည်းချာချစ်ရတဲ့သူရဲ့ ဝိဉာဉ်လေးက ကောင်းကင်ဘုံက အလင်းရောင်ထဲကိုသွားရလုနီးနီး ငရဲဘုရင် လူစီဖာက မျက်စိရှေ့တင် ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ စစ်သည်တော် ဒန်တေးတစ်ယောက်ငရဲထိလိုက်ပြီး ကယ်တင်ပါတော့တယ် အင်ဖာနိုငရဲရဲ့ စက်ကွင်းကြီးကိုးခုကိုဖြတ်ပြီး ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်မလဲ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ချစ်ရသူတို့ကို ဘယ်သူကသတ်ဖြတ်ခဲ့သလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် Review –Caskey File Size – 800MB,1.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p ...
IMDB: 6.6/10 8,609 votes
In Gold We Trust (2010) (App member only) ##unicode In Gold We trust ဇာတျကားမှာတော့ Vrigilနဲ့ သူငယျခငျြး Lionelဟာ Guyanaရှတှေငျးက ရှေ600ကီလိုဂရမျကို ခိုးထုတျဖို့စီစဉျထားပမေယျ့ အစီအစဉျမှာဘဲ တိုကျခိုကျမှုတဈခုကွောငျ့ Lionelဟာသဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့Vrigilရဲ့ ရှခေိုးထုတျမဲ့ အစီအစဉျမှာ Lionelရဲ့မိနျးမ Camilieဟာပါဝငျခဲ့တယျ။ ရှတှေခေိုးထုတျဖို့လုပျနခြေိနျမှာ Camilieဟာ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတဈယောကျကို ကယျတငျလိုကျတာကွောငျ့ Vrigilတို့ရဲ့ လယောဉျဟာ မတျောမဆဖွဈကာ Guyanaတောထဲမှာ ပကျြသှားခဲ့တယျ။ရှတေူးသမားတှကေလဲ Vrigilတို့ကို အသသေတျဖို့ နောကျကလိုကျရှာနတောကွောငျ့ Vrigilတို့ သူခိုး၇ယောကျဟာ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့အတူ ရှေ600ကီလိုဂရမျကို သယျပွီးတော့ တောအုပျထဲကနေ ထှကျပွေးဖို့ လမျးရှာရပါတော့တယျ။Vrigilတို့ 7ယောကျသား ဒီတောအုပျထဲကနေ အဖမျးမခံရဘဲနဲ့ ရှတှေနေဲ့အတူအသကျရှငျလကျြ ထှကျပွေးနိုငျပါ့မလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi In Gold We trust ဇာတ်ကားမှာတော့ Vrigilနဲ့ သူငယ်ချင်း Lionelဟာ Guyanaရွှေတွင်းက ရွှေ600ကီလိုဂရမ်ကို ခိုးထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် အစီအစဉ်မှာဘဲ တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့် Lionelဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့Vrigilရဲ့ ရွှေခိုးထုတ်မဲ့ အစီအစဉ်မှာ Lionelရဲ့မိန်းမ Camilieဟာပါဝင်ခဲ့တယ်။ ရွှေတွေခိုးထုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာ Camilieဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကယ်တင်လိုက်တာကြောင့် Vrigilတို့ရဲ့ လေယာဉ်ဟာ ...
I Spit on Your Grave (2010) (App member only) ##umicode Jennifer Hiller ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာမလေးဟာ သူ့ရဲ့စာအုပျအသဈအတှကျ နယျမွိုလေးတဈမွိုရဲ့ခြောငျကကြတြောအုပျလေးထဲက အိမျလေးတဈလုံးမှာ လာငှားနရေငျး စိတျငွိမျငွိမျ အေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့စာရေးနိုငျဖိုစီစဉျခဲ့ပါတယျ ထိုအစီအစဉျကို အဲဒီနရောအသဈနားက လူရမျးကားအုပျစုတဈစုက လုံးဝကိုဖကျြဆီးပဈလိုကျပါတော့တယျ အဲဒီလူရမျးကားအုပျစုက ညတဈညမှာ Jennifer ရဲ့အိမျထဲကို အကွမျးဖကျဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး သူမနဲ့ ဘာရနျငွိုးရနျစမှမရှိဘဲနဲ့ကို ရကျစကျစှာ ညှငျးပနျးနှိပျစကျ မုဒိမျးကငျြ့ခဲ့ပါတယျ သှေးပကျြစရာအိပျမကျဆိုးတဈခုလိုနှိပျစကျခံခဲ့ရတဲ့ သူမဟာ ဘယျလိုအခွအေနထေိ ဖွဈပကျြသှားခဲ့ရမလဲဆိုတာကို သညျးထိပျရငျဖိုဖှယျရိုကျကူးပုံဖျောထားပါတယျ (Rape ခနျး 18+ တှပေါလို့ မိသားစုနဲ့တူတူမကွညျ့သငျ့ပါဘူး ) ##zawgyi Jennifer Hiller ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာမလေးဟာ သူ့ရဲ့စာအုပ်အသစ်အတွက် နယ်မြိုလေးတစ်မြိုရဲ့ချောင်ကျကျတောအုပ်လေးထဲက အိမ်လေးတစ်လုံးမှာ လာငှားနေရင်း စိတ်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စာရေးနိုင်ဖိုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ် ထိုအစီအစဉ်ကို အဲဒီနေရာအသစ်နားက လူရမ်းကားအုပ်စုတစ်စုက လုံးဝကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတော့တယ် အဲဒီလူရမ်းကားအုပ်စုက ညတစ်ညမှာ Jennifer ရဲ့အိမ်ထဲကို အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး သူမနဲ့ ဘာရန်ငြိုးရန်စမှမရှိဘဲနဲ့ကို ရက်စက်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပါတယ် သွေးပျက်စရာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေထိ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ရမလဲဆိုတာကို သည်းထိပ်ရင်ဖိုဖွယ်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပါတယ် (Rape ခန်း 18+ တွေပါလို့ မိသားစုနဲ့တူတူမကြည့်သင့်ပါဘူး ) Review – Chuu Chuu File ...
IMDB: 6.3/10 79,773 votes
Gintama: The Movie (2010) ##unicodeှGintama movie တှရေဲ့ ဒုတိယမွောကျကားကိုတငျဆကျပေးပါ့မယျ ညတဈညမှာတော့ တံတားတဈစငျးပျေါမှာ Katsura ဟာ ronin တှတေိုကျခိုကျတာကိုခံလိုကျရပါတယျ Katsura ရဲ့ အပေါငျးအဖျောဖွဈတဲ့ Elizabeth က Katsura ကိုရှာဖို Zura ဆီမှာ သှားအကူအညီတောငျးလိုကျပါတယျ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ Gintoki Sakata ဟာ ကှငျးဆကျလူသတျမှူတှကြေူးလှနျဖို အခိုးခံလိုကျရတဲ့ ကြိနျစာသငျ့ ခယျြရီပနျးပှငျ့ဓားကို ပွနျရှာပေးဖို တောငျးဆိုခံလိုကျရပါတယျ နောကျဆုံး သူတိုရငျဆိုငျရမယျ့ ရနျသူဟာ တဈယောကျတညျးဖွဈနတေဲ့အခါ ဘယျလိုရငျဆိုငျတိုကျခိုကျသှားမလဲဆိုတာ ဇာတျလမျးလေးထဲမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျပါနျော🤗 ##zawgyiွGintama movie တွေ၇ဲ့ ဒုတိယမြောက်ကားကိုတင်ဆက်ပေးပါ့မယ် ညတစ်ညမှာတော့ တံတားတစ်စင်းပေါ်မှာ Katsura ဟာ ronin တွေတိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ် Katsura ရဲ့ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်တဲ့ Elizabeth က Katsura ကိုရှာဖို Zura ဆီမှာ သွားအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Gintoki Sakata ဟာ ကွင်းဆက်လူသတ်မှူတွေကျူးလွန်ဖို အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ ကျိန်စာသင့် ချယ်ရီပန်းပွင့်ဓားကို ပြန်ရှာပေးဖို တောင်းဆိုခံလိုက်ရပါတယ် နောက်ဆုံး သူတိုရင်ဆိုင်ရမယ့် ရန်သူဟာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခါ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သွားမလဲဆိုတာ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ...
IMDB: 7.7/10 1,589 votes
The Holy Man3(2010) ##unicode The Holy Man3ကတော့ ၂၀၁၀ လောကျကထှကျရှိထားတာပါ ဒီဇာတျကားမှာလညျးအရှကေ့ကားတှလေိုပဲ ငယျရှယျတဲ့ဘုနျးကွီးတှရေဲ့ တီထှငျဖနျတီးမှုဉာဏျတှနေဲ့ ဟာသဆနျဆနျဖွဈရပျလေးတှကေို ရိုကျကူးပွထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ပရာနှိုငျဆိုတဲ့အဆိုတျောဟာ လောကကွီးကိုစိတျကုနျနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ ဘုနျးကွီးဝတျနတေဲ့ပရာဆာ့ချြကိုတှပွေီ့း ဘုနျးကွီးဝတျခငျြစိတျဖွဈသှားပါတယျ ဘုနျးကွီးအသဈနှဈပါး သတငျးစသုံးတဲ့အခြိနျမှာပဲ သူခိုးတှဟောဘုနျးကွီးကြောငျးမှာရှိတဲ့ဆငျးတုတျောကို ခိုးဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ ဘုနျးကွီးအသဈနှဈပါး စပွီးကွုံတှလေ့ာရတဲ့ ပွဿနာတှကေိုဘယျလို ဖွရှေငျးကွမလဲ သူခိုးတှလေကျထဲကနေ ဆငျးတုတျောကိုကာကှယျသှားနိုငျပါ့မလားဆိုတာကို ကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ဒီကားကလညျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ရယျမောရမယျ့ကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi The Holy Man3ကတော့ ၂၀၁၀ လောက်ကထွက်ရှိထားတာပါ ဒီဇာတ်ကားမှာလည်းအရှေ့ကကားတွေလိုပဲ ငယ်ရွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုဉာဏ်တွေနဲ့ ဟာသဆန်ဆန်ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ရိုက်ကူးပြထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ပရာနွိုင်ဆိုတဲ့အဆိုတော်ဟာ လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဘုန်းကြီးဝတ်နေတဲ့ပရာဆာ့ခ်ျကိုတွေ့ပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်စိတ်ဖြစ်သွားပါတယ် ဘုန်းကြီးအသစ်နှစ်ပါး သတင်းစသုံးတဲ့အချိန်မှာပဲ သူခိုးတွေဟာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆင်းတုတော်ကို ခိုးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဘုန်းကြီးအသစ်နှစ်ပါး စပြီးကြုံတွေ့လာရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ သူခိုးတွေလက်ထဲကနေ ဆင်းတုတော်ကိုကာကွယ်သွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဒီကားကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ရယ်မောရမယ့်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Comedy Subtitle : ...
Veer (2010) ##unicode ဒီတဈခါမှာတော့ နာမညျကွီးမငျးသား Salman Khanရဲ့ဇာတျကားကောငျးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ romance action ဇာတျကားအမြိုးအစားဖွဈပါတယျ romance ဆိုတဲ့အတိုငျး အခဈြဇာတျလမျးလေးလညျးပါတယျ သီခငျြးကောငျးကောငျးတှလေညျးပါတယျ ပွီးတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံကို ဗွိတိသြှတှစေတငျကြူးကြျောခါစက အကွောငျးရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးပါ ဗွိတိသြှတှကေိုတျောလှနျရေးစတငျခဲ့ပုံကိုဇာတျကွောငျးအခွခေံထားပါတယျ ထိုအခြိနျတုနျးက အိန်ဒိယပွညျကမစညျးလုံးသေးပဲ ဘုရငျတှမြေားစှာနဲ့ပွညျနယျအသီးသီးကှဲနပေါတယျ မနျဒနျဂတျပွညျနယျဟာ ဗွိတိသြှတှနေဲ့ပူးပေါငျးပွီးတော့ ပငျဒါရီမြိုးနှယျတှကေိုသစ်စာဖောကျခဲ့ပါတယျ မနျဒနျဂတျပွညျနယျရဲ့မငျးသမီးလေးကို ပငျဒါရီမြိုးနှယျခေါငျးဆောငျတဈယောကျရဲ့သား ဗီဒဲကခဈြမိသှားပွီး ဗီဒဲကို အင်ျဂလနျမှာပညာသငျဖို့ သူ့အဖကေလှတျလိုကျတော့ မငျးသမီးလေးနဲ့ပွနျဆုံခဲ့ပါတယျ ဒါပမေယျ့ မြိုးနှယျနှဈခုရဲ့ရနျငွိုးတှကွေောငျ့ သူတို့အခဈြဇာတျလမျးဘယျလိုဖွဈလာမလဲ ဗွိတိသြှတှကေိုရော တျောလှနျရေးဘယျလိုစတငျမှာလဲဆိုတာ ကွညျ့ရူရမဲ့ ဇာတျကားတဈကားပဲဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခါမှာတော့ နာမည်ကြီးမင်းသား Salman Khanရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် romance action ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် romance ဆိုတဲ့အတိုင်း အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလည်းပါတယ် သီချင်းကောင်းကောင်းတွေလည်းပါတယ် ပြီးတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှတွေစတင်ကျူးကျော်ခါစက အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပါ ဗြိတိသျှတွေကိုတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့ပုံကိုဇာတ်ကြောင်းအခြေခံထားပါတယ် ထိုအချိန်တုန်းက အိန္ဒိယပြည်ကမစည်းလုံးသေးပဲ ဘုရင်တွေများစွာနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကွဲနေပါတယ် မန်ဒန်ဂတ်ပြည်နယ်ဟာ ဗြိတိသျှတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပင်ဒါရီမျိုးနွယ်တွေကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့ပါတယ် မန်ဒန်ဂတ်ပြည်နယ်ရဲ့မင်းသမီးလေးကို ပင်ဒါရီမျိုးနွယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့သား ဗီဒဲကချစ်မိသွားပြီး ဗီဒဲကို အင်္ဂလန်မှာပညာသင်ဖို့ သူ့အဖေကလွှတ်လိုက်တော့ မင်းသမီးလေးနဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် မျိုးနွယ်နှစ်ခုရဲ့ရန်ငြိုးတွေကြောင့် သူတို့အချစ်ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ဗြိတိသျှတွေကိုရော တော်လှန်ရေးဘယ်လိုစတင်မှာလဲဆိုတာ ကြည့်ရူရမဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် review – Hmue File Size – 1.6GB,3.6GB Format…mp4 Quality : 720p ...
IMDB: 4.5/10 7,257 votes
Green Zone (2010) ##unicode 2010ခုနှဈကထှကျထားတဲ့ နာမညျကွီးစဈကားလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ နိုငျငံရေးလှညျ့ကှကျတှနေဲ့ ရှုပျထှေးနတေဲ့ စဈကားတဈကားဆိုတော့ ပရိသတျကွီးသဘောကမြှာ အမှနျပါ ရှိုငျမလောဆိုတဲ့ အမရေိကနျစဈသားက နြူးကလိယလကျနတျရှာဖှရေေး ဌာနမှာအရာခံဗိုလျအဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျနသေူပါ အီရတျနဲ့အမရေိကနျစဈဖွဈပှားနပွေီး မလောတို့ နြူးကလိယလကျနတျ‌တှနေဲ့ ပတျသတျတဲ့သတငျးရတာကွောငျ့ လကျနတျရှာဖှဖေို့ အီရတျကိုထှကျခဲ့ပါတယျ ဒါပမေယျ့သတငျးရတဲ့နရောအတိအကကြ အိမျသာခှကျစကျရုံဟောငျးဖွဈနခေဲ့တယျ တဈခွားသူတှကေ ဒီအတိုငျးကြျောသှားပမေယျ့ မလောကတော့ သံသယဝငျခဲ့တယျ မလောဟာ လကျနတျနောကျကိုလိုကျရငျး အမရေိကနျဘကျက အီရတျရဲ့ ဘယျလိုကိစ်စတှကေိုဖုံးကှယျထားလဲဆိုတာ တဈစတဈစသိလာရတော့တယျ ဒီလိုစိတျဝငျစားစရာတှနေဲ့အပွညျ့နဲ့ကားလေးကို ကွညျ့ရှုခံစားလိုကျပါဦးရှငျ ##zawgyi 2010ခုနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ နာမည်ကြီးစစ်ကားလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ စစ်ကားတစ်ကားဆိုတော့ ပရိသတ်ကြီးသဘောကျမှာ အမှန်ပါ ရွိုင်မေလာဆိုတဲ့ အမေရိကန်စစ်သားက နျူးကလိယလက်နတ်ရှာဖွေရေး ဌာနမှာအရာခံဗိုလ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပါ အီရတ်နဲ့အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေပြီး မေလာတို့ နျူးကလိယလက်နတ်‌တွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့သတင်းရတာကြောင့် လက်နတ်ရှာဖွေဖို့ အီရတ်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်သတင်းရတဲ့နေရာအတိအကျက အိမ်သာခွက်စက်ရုံဟောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ် တစ်ခြားသူတွေက ဒီအတိုင်းကျော်သွားပေမယ့် မေလာကတော့ သံသယ၀င်ခဲ့တယ် မေလာဟာ လက်နတ်နောက်ကိုလိုက်ရင်း အမေရိကန်ဘက်က အီရတ်ရဲ့ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုဖုံးကွယ်ထားလဲဆိုတာ တစ်စတစ်စသိလာရတော့တယ် ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့အပြည့်နဲ့ကားလေးကို ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါဦးရှင် Review – ACP File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Genre : Action, Drama, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle ...
IMDB: 6.8/10 129,030 votes
The Whistleblower (2010) ##unicode ယခုတငျဆကျပေးခငျြတဲ့ဇာတျကားကတော့ လူကုနျကူးမှုနဲ့ပကျသကျနတေဲ့UNအရာရှိတှနေဲ့ရဲအရာရှိတို့ရဲ့အကငျြ့ပကျြခွစားမှုအကွောငျးတှကေို ဖျောပွရိုကျကူးထားတဲ့ စိတျလူပျရှားစရာ ဖွဈရပျမှနျဇာတျကားကောငျးတဈကားပဲဖွဈပါတယျ ကတျတီဟာ အလှနျအလုပျကွိုးစားတဲ့ရဲမတေဈယောကျပါ ထို့ကွောငျ့ မိသားစုကိုအခြိနျမပေးနိုငျပဲ ကလေးအုပျထိနျးခှငျ့ကိုလညျးဆုံးရူံးခဲ့ရပါတယျ ထို့နောကျမှာတော့ Bosnia ကိုသှားဖို့အတှကျ UNကတဈဆငျ့စလှေတျတဲ့အစီအစဉျမှာပါဝငျခဲ့ပါတယျ Bosnia နိုငျငံက စဈပွီးသှားတဲ့နောကျပိုငျးမှာလညျးအခွအေနတှေမေတညျမငွိမျသေးတဲ့နိုငျငံပါ အာ့နိုငျငံကိုငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျပေးဖို့သှားတဲ့ ကတျတီဟာ လူကုနျကူးမှုတှကေို တှကွေုံ့ခဲ့ရပါတယျ အမြိုးသမီးငယျလေးတှဟော လိငျကြှနျအဖွဈဖွားယောငျးခံနရေတာကို တှပွေီ့းတဲ့နောကျမှာ အမှုမှနျကိုဖျောနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါတော့တယျ ဒါပမေဲ့သူမရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျအရာရှိအမြားစုနဲ့ UNရဲ့အထကျအရာရှိတှကေ ဒီကိစ်စကိုမကျြကှယျပွုထားကွပါတယျ အရာရှိမြားရဲ့လာဘျစားမှုတှကွေောငျ့ ကတျတီက အမှုမှနျကိုဖျောနိုငျမှာလား သူမဘယျလိုအခကျအခဲအတားအဆီးတှကေို ကွုံရမလဲဆိုတာစိတျလူပျရှားစှာနဲ့စောငျ့ကွညျ့ရမဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားပဲဖွဈပါတယျ ##zawgyi ယခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပက်သက်နေတဲ့UNအရာရှိတွေနဲ့ရဲအရာရှိတို့ရဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအကြောင်းတွေကို ဖော်ပြရိုက်ကူးထားတဲ့ စိတ်လူပ်ရှားစရာ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ကတ်တီဟာ အလွန်အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ရဲမေတစ်ယောက်ပါ ထို့ကြောင့် မိသားစုကိုအချိန်မပေးနိုင်ပဲ ကလေးအုပ်ထိန်းခွင့်ကိုလည်းဆုံးရူံးခဲ့ရပါတယ် ထို့နောက်မှာတော့ Bosnia ကိုသွားဖို့အတွက် UNကတစ်ဆင့်စေလွှတ်တဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ် Bosnia နိုင်ငံက စစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခြေအနေတွေမတည်မငြိမ်သေးတဲ့နိုင်ငံပါ အာ့နိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ပေးဖို့သွားတဲ့ ကတ်တီဟာ လူကုန်ကူးမှုတွေကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ် အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာ လိင်ကျွန်အဖြစ်ဖြားယောင်းခံနေရတာကို တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အမှုမှန်ကိုဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့သူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အရာရှိအများစုနဲ့ UNရဲ့အထက်အရာရှိတွေက ဒီကိစ္စကိုမျက်ကွယ်ပြုထားကြပါတယ် အရာရှိများရဲ့လာဘ်စားမှုတွေကြောင့် ကတ်တီက အမှုမှန်ကိုဖော်နိုင်မှာလား သူမဘယ်လိုအခက်အခဲအတားအဆီးတွေကို ကြုံရမလဲဆိုတာစိတ်လူပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 1.2GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Duration… 1h 52min Genre : Biography, ...
IMDB: 7.1/10 31,445 votes
Monga ##unicode ဇာတျလမျးအကဉျြး ဒီဇာတျကားကတော့ မှနျဂါဆိုတဲ့စီးပှားရေးအခကျြအခြာကပြွီး လူဆိုးဂိုဏျးတှအေမြားကွီးအုပျစိုးနတေဲ့မွို့ငယျလေးတဈမွို့ ဖွဈပါတယျ အငျအားအကွီးဆုံးအဖှဲ့နှဈခုကတော့ ဘုရားကြောငျးအရှဂေို့ဏျးနဲ့အနောကျဘကျလမျးကွားဂိုဏျး ဆိုပွီး အဖှဲ့နှဈဖှဲ့ရှိတယျ ဝနျးကဈြ(ခွငျ)ကငယျငယျကတညျးက အဖမေရှိဘဲနခေဲ့ရပွီး သူမြားကလေးတှရေဲ့ အနိုငျကငျြ့ခွငျးကိုခံရသူဖွဈတယျ ဝနျးကဈြနဲ့ သူ့အမဟော မှနျဂါမွို့ကိုပွောငျးရှလေ့ာပွီးနောကျ မှာလညျး ဝနျးကဈြဟာသူ့ကြောငျးအသဈမှာလညျး အနိုငျကငျြ့ခံရပွနျတယျ တဈနမှေ့ာအနိုငျကငျြ့တဲ့သူတှဆေီက ထှကျပွေးရငျး ဘုရားကြောငျးအရှဂေို့ဏျးက ကဈြလုံ(နဂါး) ဟယျရှနျ့(ဘုနျးကွီး) ပကေောငျး (မြောကျ) နဲ့ အားပတေို့ လေးယောကျကတှသှေ့ားခဲ့တယျ ထိုလေးယောကျက ဝနျးကဈြကိုသူတို့အဖှဲ့ထဲဝငျရနျပွောရာမှ ဝနျးကဈြဟာ ဂိုဏျးဝငျတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတော့တယျ ဒီဇာတျကားမှာ လူဆိုးဂိုဏျးတှရေဲ့ ပဋိပက်ခတှေ ရနျပှဲတှကေို တှရှေိ့နိုငျမှာဖွဈပွီး ထိုပွဿနာမြားကွားမှ သူငယျခငျြးလေးယောကျရဲ့ ညီအဈကိုသံယောဇဉျကွီးမားပုံတှကေိုလညျး တှမွေ့ငျနိုငျမယျ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈလို့ကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦး ##zawgyi ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဒီဇာတ်ကားကတော့ မွန်ဂါဆိုတဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာကျပြီး လူဆိုးဂိုဏ်းတွေအများကြီးအုပ်စိုးနေတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ် အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့နှစ်ခုကတော့ ဘုရားကျောင်းအရှေ့ဂိုဏ်းနဲ့အနောက်ဘက်လမ်းကြားဂိုဏ်း ဆိုပြီး အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ် ဝန်းကျစ်(ခြင်)ကငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေမရှိဘဲနေခဲ့ရပြီး သူများကလေးတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသူဖြစ်တယ် ဝန်းကျစ်နဲ့ သူ့အမေဟာ မွန်ဂါမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက် မှာလည်း ဝန်းကျစ်ဟာသူ့ကျောင်းအသစ်မှာလည်း အနိုင်ကျင့်ခံရပြန်တယ် တစ်နေ့မှာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေဆီက ထွက်ပြေးရင်း ဘုရားကျောင်းအရှေ့ဂိုဏ်းက ကျစ်လုံ(နဂါး) ဟယ်ရှန့်(ဘုန်းကြီး) ပေကောင်း (မျောက်) နဲ့ အားပေ့တို့ လေးယောက်ကတွေ့သွားခဲ့တယ် ထိုလေးယောက်က ဝန်းကျစ်ကိုသူတို့အဖွဲ့ထဲဝင်ရန်ပြောရာမှ ဝန်းကျစ်ဟာ ဂိုဏ်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ် ဒီဇာတ်ကားမှာ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေရဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ရန်ပွဲတွေကို တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ထိုပြဿနာများကြားမှ သူငယ်ချင်းလေးယောက်ရဲ့ ညီအစ်ကိုသံယောဇဉ်ကြီးမားပုံတွေကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်မယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး Review – Phyu Sin File Size – 1.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL Duration…2h 20min Genre :Action, ...
IMDB: 6.9/10 2,584 votes
Tangled ကောငျမလေးက- အမျမကျတဈခုကို လိုလားတောငျ့တခဲ့ပွီး အဲ့ဒီတဈခုအတှကျကွိုးစားလြှောကျလှမျးရငျး တဈနအေဲ့ဒီပနျးတိုငျကိုရောကျတဲ့အခါမှာကော ပြျောရှငျရပါ့မလား မြှျောမှနျးထားသလိုကော ဖွဈလာပါ့မလား ဖွဈလာခဲ့ရငျကော အဲ့ဒါပွီးရငျ ဘာဆကျလုပျရမှာလဲ လို့မေးတဲ့အခါ ကောငျလေးက- အဲ့ဒီအတှကျ ကောငျးကှကျကတော့ မငျးနောကျအိမျမကျတဈခုကိုမကျလို့ရပွီပေါ့… ငါ့ရဲ့အိမျမကျအသဈကတော့ မငျးပါပဲ… အိုကေ Tangled ဆိုတာ 2010 တညျးကထှကျခဲ့တဲ့ Animation Movie တဈခုပါ။ ဆံပငျရှညျကောငျမလေး နဲ့သူခိုးလေးတဈယောကျတို့ရဲ့ ဇတျလမျးလေးပေါ့ ဇတျကှကျ အလှညျ့အပွောငျးလေးတှကေတော့အားလုံး အလှတျတောငျရနလေောကျပါပွီ။ ဒီဇတျကားလေးကို ဖနျမြားအကွညျပွနျသိမျးနိုငျဖို့နဲ့ နောကျတဈကွိမျဟိုးတဈခြိနျက ဆံပငျရှညျနဲ့ကောငျမ‌လေးဇတျကားကို ပွနျခံစားနိုငျဖို့ ခနျြနယျမွနျမာကနေ တဈဖနျပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဇတျကားက Musical Animation တဈခုဖွဈတာကွောငျ့ ဇတျကားထဲကသီခငျြးမြားကိုလဲ အတတျနိုငျဆုံး မူရငျးအရသာမပကျြအောငျ ဘာသာပွနျထားပေးပါတယျခငျဗြ။ “I See the Light” သီခငျြးနဲ့ 54th Grammy Awards နဲ့ Best Song Awards ဆုတို့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ Nominated မြားစှာဝငျခဲ့ပွီး ဇတျလမျးတို Tangled Ever After ကို 2012 မှာထပျထှကျခဲ့ပါသေးတယျ။ တကယျတော့ Tangled က ကြှနျတျောတို့ ပရိတျသတျတှရှေကေို့ 2010 မှာရောကျရှိလာခဲ့ပမေယျ့ Production Process ခညျြးပဲ ခွောကျနှဈကွာခဲ့တယျဗြ။ ခနျ့မှနျးခွေ ...
IMDB: 7.7/10 398,224 votes
Firebreather (2010) ##unicode ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ လှနျခဲ့တဲ့၁၆နှဈတုနျးကလူသားတှနေဲ့Kaijuဆိုတဲ့မကောငျးဆိုးဝါးတှစေဈပှားခဲ့ကွပါတယျ။ အဲ့စဈပှဲမှာလူသားတှအေနိုငျရခဲ့ပွီးတော့Kaijuတှကေပြောကျကှယျသှားခဲ့တယျ။ Duncanဆိုတဲ့ကောငျလေးမှာတော့အမကေလူသားဖွဈပွီးတော့အဖကေKaijuဘုရငျBelloceတဈဦးဖွဈတယျ။အသကျ၁၆နှဈသာရှိသေးတဲ့Duncanတဈယောကျကလိမ်မျောရောငျအသားရကွေောငျ့ အတနျးဖျောတှနေောကျပွောငျတာခံရပွီးတော့အခုကြောငျးအသဈကိုပွောငျးရှလေ့ာသူဖွဈတယျ။ အခုကြောငျးအသဈမှာလဲကြောငျးကအလှဆုံးကောငျမလေးJennaကိုသဘောကမြိလို့ အနိုငျ့ကငျြသူတှဖွေဈတဲ့Traoyတို့ရနျစတာခံခဲ့ရတယျ။ သူတို့ရနျဖွဈနရေငျး Duncanကမတျောမဆသူမှာမီးမှုတျနိုငျတဲ့စှမျးရညျကွောငျးသိရှိသှားခဲ့တယျ။ Kaijuဘုရငျသူ့အဖကေလဲသူ့ကိုလူသားတှနေဲ့မနစေခေငျြဘဲKaijuတှကေိုအုပျခြုပျဖို့သူ့နရောကို ဆကျခံခိုငျးဖို့အတှကျDuncanကိုလာရောကျရှာဖှဖေို့ကွိုးစားသောအခါ Duncanတဈယောကျkaijuတှနေဲ့ဘယျလိုတိုကျလိုကျမလဲ။ သူ့ကြောငျးသားဘဝကရောအေးအေးဆေးဆေးဖွတျသနျးရမလား။ Jennaကရောသူ့ကိုစိတျဝငျစားမလားဆိုတာစိတျဝငျစားစှာကွညျ့ရှုရမဲ့ကားလေးပါ။ ##zawgyi ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့၁၆နှစ်တုန်းကလူသားတွေနဲ့Kaijuဆိုတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေစစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့စစ်ပွဲမှာလူသားတွေအနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့Kaijuတွေကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ Duncanဆိုတဲ့ကောင်လေးမှာတော့အမေကလူသားဖြစ်ပြီးတော့အဖေကKaijuဘုရင်Belloceတစ်ဦးဖြစ်တယ်။အသက်၁၆နှစ်သာရှိသေးတဲ့Duncanတစ်ယောက်ကလိမ္မော်ရောင်အသားရေကြောင့် အတန်းဖော်တွေနောက်ပြောင်တာခံရပြီးတော့အခုကျောင်းအသစ်ကိုပြောင်းရွေ့လာသူဖြစ်တယ်။ အခုကျောင်းအသစ်မှာလဲကျောင်းကအလှဆုံးကောင်မလေးJennaကိုသဘောကျမိလို့ အနိုင့်ကျင်သူတွေဖြစ်တဲ့Traoyတို့ရန်စတာခံခဲ့ရတယ်။ သူတို့ရန်ဖြစ်နေရင်း Duncanကမတော်မဆသူမှာမီးမှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြောင်းသိရှိသွားခဲ့တယ်။ Kaijuဘုရင်သူ့အဖေကလဲသူ့ကိုလူသားတွေနဲ့မနေစေချင်ဘဲKaijuတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့သူ့နေရာကို ဆက်ခံခိုင်းဖို့အတွက်Duncanကိုလာရောက်ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားသောအခါ Duncanတစ်ယောက်kaijuတွေနဲ့ဘယ်လိုတိုက်လိုက်မလဲ။ သူ့ကျောင်းသားဘဝကရောအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းရမလား။ Jennaကရောသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးပါ။ Review – Myet Chel File Size – 989GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Duration… 1h 10min Genre : Animation, Action, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow
IMDB: 6.1/10 1,456 votes
IMDB: 6.9/10 10,457 votes
Henry’s Crime Henry’s Crime (2010) အညှနျး ****************************** ဒီကားလေးကိုတော့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးနဲ့ ရငျးနီးပွီးသား မငျးသားဖွဈတဲ့ Keanu Reeves ၊ မငျးသမီး Vera Farmiga နဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ မငျးသားကွီး James Caan တို့က အတှဲအဖကျညီညီ သရုပျဆောငျထားကွပါတယျ… ဟငျနရီ တျောနျ ဟာသူ့ရဲ့ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ ဘစျေ့ဘောကစားဖို့ လိုကျသှားခဲ့ရာမှ….ကံဆိုးခငျြတော့ သူ့ဘျောဒါတှေ ကြူးလှနျတဲ့ ဘဏျဓားပွတိုကျတဲ့အမှုမှာ ဟငျနရီ က ပူးပေါငျးပါဝငျမှုနဲ့ ထောငျ၃ နှဈကသြှားခဲ့ပါတယျ…. ဘာအပွဈမှမကြူးလှနျဘဲနဲ့ ထောငျနနျးစံလိုကျရတဲ့ ဟငျနရီ ဟာ ထောငျကလှတျလာတဲ့ အခါ မှာတော့…. သူ မတိုကျလိုကျရတဲ့ ဘဏျကို…အခုမှ တကယျ ဓားပွတိုကျဖို့ ကွံစညျပါတော့တယျ…….
IMDB: 6.0/10 18,692 votes
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (2010) Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (2010) မွနျမာစာတနျးထိုး တိခဈြသူတှအေတှကျ အခုခြိနျအိမျတှငျးအောငျးနရေတာဆိုတော့ စိတျအပနျးပွေ ဟာသကားလေးလညျးဖွဈ တိရိစ်ဆာနျ ဇာတျကားလေးလညျးဖွဈဆိုတော့လနျးပွီပေါ့နျော ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးအနနေဲ့ကတော့ Kitty Galore ကသူ့ရဲ့ လြှို့ဝှကျစီမံကိနျးကွီးကိုအကောငျအထညျဖျောဖို့ကွိုးစားစီမံပွီး ကမ်ဘာကွီးကိုဘယျလိုမြိုး နှောကျယှကျဖကျြစီးမလဲဆိုတာ ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ… ဒီလိုမြိုးအဖွဈဆိုးတှကေို ရငျဆိုငျနကွေရတဲ့ ခှေးတှကွေောငျတှရေဲ့ အဖွဈကတော့ အရငျကရနျငွိုးတှဘေယျလောကျရှိရှိ Kitty ရဲ့ အကွံအစညျကိုမအောငျမွငျဖို့အတှကျ ဘယျလိုမြိုးပူးပေါငျးလုပျဆောငျကွမလဲဆိုတာ BS ကပရိတျသတျကွီး ကွညျ့ရှုလို့ခံစားလိုကျပါဦး
IMDB: 4.3/10 13,690 votes
Midnight FM Imdb Rating 6.6 ထိရရှိခဲ့သော ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်ထူးခြားသည့်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ မင်းသမီး Soo Ae က ညလယ်ပိုင်းအသံလွှင့်သူ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ နာမည်ကြီးမင်းသား Ji-Tae Yu ကို စိတ်ဝေဒနာရှင် လူဆိုးတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ Ji-Tae ကို လုံးဝခွဲထွက်နေတဲ့ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ဆိုတော့ ထူးခြားနေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။Ji-Tae နဲ့ Soo Ae ဘယ်လိုအပေးအယူမျှမျှနဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားကြမလဲဆိုတာကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အသက်ပါပဲ။ ညလယ်ပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဂိုဆိုးယွန်ရဲ့ အသံလွှင့်အစီအစဉ်ကနေ အနားယူတော့မည်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးပါတယ်။ဒီလိုကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆိုးယွန်ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေက နှမြောကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ ဆိုးယွန်၏ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးက ဆိုးယွန်ရဲ့အစီအစဉ်မှာ သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်တင်ဆက်ချင်တဲ့အတွက် ဆိုးယွန်အိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဆိုးယွန်ရဲ့ ညီမ ၊ သမီးလေး နဲ့ တူမလေးတို့ကို ဓားစာခံအဖြစ်ဖမ်းထားပြီး ဆိုးယွန်ကို ခြိမ်းခြောက်မှူတွေလုပ်ပြီးတော့ သူနားထောင်ချင်သမျှသီချင်းတွေကို ရေဒီယိုကနေ လွှင့်ခိုင်းပါတယ်။ မလွှင့်ပေးရင်သတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ချိန်းခြောက်တဲ့အတွက် ဆိုးယွန်တစ်ယောက် သမီးဇော ၊ ညီမလုပ်သူနဲ့ ...
IMDB: 6.6/10 2,068 votes
The Unjust (2010) ဒီကားလေးကတော့မင်းသားကြီး jung-min Hang နဲ့ dong-seok Ma တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားအက်ရှင်ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကျောင်းသူ၅ယောက်မုဒိမ်းကျင့်အသတ်ခံရတဲ့အမှုကြီးကြောင့် ကိုရီးယားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးဒေါသထွက်ကြရပါတယ်။ သမ္မတကြီးပါပါဝင်ပတ်သတ်လာပြီး ကိုရီးယားရဲဌာနကို တရားခံအစစ်မိရေးအတွက်ဖိအားပေးထားပါတယ်။ ရဲဌာနကချွဲအရာရှိဟာထက်မြက်တဲ့ရဲသားတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အကယ်ဒမီကျောင်းဆင်းမဟုတ်လို့ရာထူးမတက်နိုင်ရသေးသူလဲဖြစ်တယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲအဓိကသံသယရှိသူတရားခံတစ်ဦးကို မစစ်ဆေးရသေးခင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်။ အထက်ကဖိအားတွေနဲ့ရဲဌာနမှူးဟာအကယ်ဒမီကျောင်းဆင်းမဟုတ်တဲ့ချွဲအရာရှိကို တရားခံအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရှာခိုင်းလိုက်ရာကနေဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကြားကလာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေက နေလူသတ်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ထိကြီးထွားလာတာတွေ ညီနောင်သံယောဇဉ်နဲ့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာရာထူးတက်ရေးဘာကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကိုတော့…..
IMDB: 6.7/10 1,793 votes
The King of Fighters (2010) ##zawgyi "ဖိုက်တာတွေရဲ့ဘုရင်"ဆိုတဲ့ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို တခြားကမ္ဘာရဲ့အချိန်ကာလမှာကျင်းပပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလက်ခံပြီးရင် အထူးတီထွင်ထားတဲ့နားကြပ်ကနေ ပြိုင်ပွဲထဲကို ဝင်ရောက်သွားရတာပါ။ "မိုင်"နဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့"အီအိုရီ ရာဂါမီ"တို့က ဘော်စတွန်ပြတိုက်တစ်ခုမှာကျင်းပတဲ့ မျိုးနွယ်စုသုံးခုရဲ့ ရတနာသုံးခုပြပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရတနာသုံးခုကတော့ "ရာဂါမီမျိုးနွယ်ရဲ့ လည်ဆွဲ"၊"ကာဂူရာမျိုးနွယ်ရဲ့ ကြေးမုံမှန်"နဲ့ "ကူဆာနာဂီမျိုးနွယ်ရဲ့ ဓား" တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဒဏ္ဍာရီလာပုံပြင်တွေအရ ဒီရတနာသုံးခုကိုပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့သူက "အိုရိုချီ"ဆိုတဲ့မကောင်းဆိုဝါးဝိဉာဉ်ကိုလွှတ်ပေးနိုင်ပြီး အဆုံးမရှိတဲ့စွမ်းအားကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပြပွဲကျင်းပနေတုန်း "ရူဂယ်"ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ရတနာတွေကိုခိုးယူကာ တခြားကမ္ဘာဆီကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရတနာတွေကိုပြန်ယူပြီး ရူဂယ်ရဲ့အကြံဆိုးကိုတားဆီးဖို့အတွက် အတူပူးပေါင်းပြီးပြန်တိုက်ရမှာပေမယ့်လည်း မျိုးနွယ်စုသုံးခုကြားမှာ အတိတ်ကရန်ငြိုးတွေရှိနေသေးတဲ့အခါမှာတော့..... ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ဆက်လက်ရှူစားလိုက်ကြပါဦးနော် ##unicode "ဖိုကျတာတှရေဲ့ဘုရငျ"ဆိုတဲ့ ဂိမျးပွိုငျပှဲတဈခုကို တခွားကမ်ဘာရဲ့အခြိနျကာလမှာကငျြးပပါတယျ။ပွိုငျပှဲဝငျတှကေ စိနျချေါမှုတှကေိုလကျခံပွီးရငျ အထူးတီထှငျထားတဲ့နားကွပျကနေ ပွိုငျပှဲထဲကို ဝငျရောကျသှားရတာပါ။ "မိုငျ"နဲ့ သူမရဲ့ခဈြသူဖွဈတဲ့"အီအိုရီ ရာဂါမီ"တို့က ဘျောစတှနျပွတိုကျတဈခုမှာကငျြးပတဲ့ မြိုးနှယျစုသုံးခုရဲ့ ရတနာသုံးခုပွပှဲကိုတကျရောကျခဲ့ပါတယျ။ဒီရတနာသုံးခုကတော့ "ရာဂါမီမြိုးနှယျရဲ့ လညျဆှဲ"၊"ကာဂူရာမြိုးနှယျရဲ့ ကွေးမုံမှနျ"နဲ့ "ကူဆာနာဂီမြိုးနှယျရဲ့ ဓား" တှပေဲဖွဈပါတယျ။ မြိုးနှယျစုတှရေဲ့ဒဏ်ဍာရီလာပုံပွငျတှအေရ ဒီရတနာသုံးခုကိုပေါငျးစညျးနိုငျတဲ့သူက "အိုရိုခြီ"ဆိုတဲ့မကောငျးဆိုဝါးဝိဉာဉျကိုလှတျပေးနိုငျပွီး အဆုံးမရှိတဲ့စှမျးအားကိုလဲ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွပှဲကငျြးပနတေုနျး "ရူဂယျ"ဆိုတဲ့လူတဈယောကျရောကျလာပွီး ရတနာတှကေိုခိုးယူကာ တခွားကမ်ဘာဆီကိုဝငျရောကျပြောကျကှယျသှားခဲ့ပါတယျ။ရတနာတှကေိုပွနျယူပွီး ရူဂယျရဲ့အကွံဆိုးကိုတားဆီးဖို့အတှကျ အတူပူးပေါငျးပွီးပွနျတိုကျရမှာပမေယျ့လညျး မြိုးနှယျစုသုံးခုကွားမှာ ...
IMDB: 3.0/10 4,025 votes
Dog Pound (2010) ##zawgyi ကဲ Dog pound ကို မေးမေးနေတဲ့လူတွေအတွက်လာပြီနော်.. ဒီတစ်ခေါက်က လူငယ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ကားလေးပါ.. ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ..ဘွတ်ရှ်,..ဒေးဗစ်..အိန်ဂျယ်..ဆိုတဲ့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကောင်လေးသုံးယောက်က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်... သူတို့တစ်ယောက်ချင်းဆီ အကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်... ဘွတ်ရ်ှဆိုတဲ့ ကောင်လေးက လူငယ်အကျည်းထောင်အရာရှိတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အတွက် အရင်ပြစ်ဒဏ်ကျတဲ့လူငယ်အကျည်းထောင်ကနေ နိုလာဗေး အကျည်းထောင်ကို ပြောင်းရွေ့ခံလိုက်ရတယ်.. .နောက်တစ်ယောက် ဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတော့ မူးယစ်ဆေးတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးပြီး ဖြန့်လဲ ဖြန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့.. သူလဲ မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ နိုလာဗေး ကိုပဲ ရောက်လာခဲ့တယ်. .နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အိန်ဂျယ်ဆိုတဲ့ ငတိလေးကလည်း လမ်းပေါ်မှာလုယက်တဲ့ အတွက် လုယက်မှုနဲ့ နိုလာဗေးကို ပြစ်ဒဏ်နဲ့ရောက်လာတယ်.. အဲ့ဒီကနေ စပြီး ဇာတ်လမ်းက အသက်ဝင်တော့တာပဲ. သူတို့ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရမှာလဲ.. ထောင်ထဲမှာကော ပျော်ရွင်ခြင်းဆိုတဲ့ အရသာဆိုတာကြီးကို ခံစားရအုန်းမှာလား.. နောက်ပြီး ဘယ်လို စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာမှာလဲ ဆိုတာ ထောင်ကားလေးတွေကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးက မြင်တွေ့ရမှာပါ... ဒီကားလေးမှာ လူငယ် အကျည်းထောင်မှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ဖြတ်သန်းပုံကိုလည်း ကိုယ့်လူတို့ မြင်တွေ့ကြရအုန်းမှာပါ...ကြည့်ရှုလို့ကျေနပ်ကြပါစေ... ##unicode ကဲ Dog ...